के भन्छन्, दाहालको क्षेत्रका मतदाता? :: सुजिता कार्की :: Setopati
के भन्छन्, दाहालको क्षेत्रका मतदाता?
सेतोपाटी संवाददाता भरतपुर, मंसिर १७
भरतपुर महानगरपालिका–२५ अमृतनगरकी ४५ वर्षीया मना भुजेल सन्चो नभएर चुनावी माहौलमा सामेल हुन पाएकी छैनन्।
उनी दिनभरि आँगनमा बस्छिन् र चुनावको प्रचारमा हिँडेका आउने जानेलाई हेरेर अनेक अड्कल काट्छिन्। चुनाव आएसँगै उनको आँगनअगाडिको बाटोमा बुङबुङ धुलो उड्न छाडेको छ।
‘अस्ति भर्खरै बाटो पिच भएको छ। त्यो बाटो कसले बनायो भन्ने पनि उनलाई थाहा छैन्। ‘कति वर्षपछि बाटो बल्ल पिच भयो। धुलो खाँदा खाँदा हैरान भएका थियौं,’ उनले भनिन्।
स्थानीय चुनावमा भोट मत हालेकी उनले यसपालि कसलाई भोट हाल्ने भने निधो गरिसकेकी छैनन्। ‘घरघरै भोट माग्न कुनै नेता आएका छैनन्। घरबाटै ¥याली गएको देखिन्छ, माइकमा बोलेको सुनिन्छ। पहिला नेताको कुरा सुनुम, के भन्छन्,’उनले भनिन्।
यो क्षेत्र चितवनको क्षेत्र नम्बर ३ मा पर्छ। यहाँ उम्मेदवार बनेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एमालेको साथ छ भने राप्रपा विक्रम पाण्डेलाई कांग्रेसले सघाएको छ। पाण्डेले यही क्षेत्रबाट २०७० को चुनाव जितेका हुन् भने दाहाल पहिलो पटक गृहजिल्लाबाट चुनाव लड्दैछन्।
एकातिर दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका दाहाल र अर्कातिर स्थानीयस्तरमा ठूलो प्रभाव भएका पाण्डे चुनावी मैदानमा उत्रिदा मतदातालाई दोमन भएको छ, मनाकी छिमेकी सविता भुजेलले आफूहरूका समस्या सामाधान गर्ने नेतालाई भोट दिने बताइन्। प्रचण्डले अहिलेसम्म केही नगरेका तर अब यो केही गर्छन् कि भन्ने आशा रहेको उनले बताइन्। ‘पाण्डेलाई परार जिताएको हो। यो पाली भोट माग्न पनि घरमा आएका छैनन्,’ उनले भनिन्,‘पहिला जिताएकाले केही गरेका छैनन्। अब प्रचण्डले केही गर्छन् की भन्ने आशा छ।’
भरतपुर–२४ जगतपुरका मतदाता जग्गा लालपुर्जा बनाइ दिने नेतालाई भोट दिने बताउँछन्। तीनै मतदातालाई आफूतिर तान्न दाहाल र पाण्डे दुबैले कसरत गरिरहेका छन्। दाहालले ९० प्रतिशत जनतालाई क्याविनेटको पहिलो बैठकबाटै पुर्जा दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। २० वर्षदेखि यही क्षेत्रमा काम गर्दै आएकाले यहाँको समस्याको आफूले राम्ररी बुझेको र लालपुर्जाको दिलाउन पनि आफूले सकेको गर्ने पाण्डेको प्रतिवद्धता छ।
यो क्षेत्रमा पाण्डेको छवि विकास गर्ने नेताको रूपमा बनेको छ। दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका नेता दाहाल र स्थानीय स्तरमा ‘काम गर्ने नेता’ पाण्डे दुवैले आफूले चितवनमा विकाशको लहर ल्याउने दाबी गरे पनि जनताले कसलाई बढी भरोसा गर्ने निर्णय गरिसकेका छैनन्।
शुक्रनगरकी एक मतदाताले बाटो, प्राविधिक शिक्षा, चेलीबेटी बेचविखन र बेरोजगारी समाधान गर्नेलाई भोट दिने बताइन्। उनले भनिन्,‘राति उठ्ने बेला आगनमा बँदेल खनिरहेको हुन्छ, सुरक्षा छैन, युवा सबै विदेसिए, चेलीबेटी बेचविखन बढ्दो छ। यस्तो समस्या समाधान गर्ने नेता नै हामीले चुन्नेछौं।’
तस्वीरः विद्या राजपुत/सेतोपाटी
प्रकाशित मिति: आईतबार, मंसिर १७, २०७४, ०६:००:०४